YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, June 23
အစည်းအဝေးလုပ်မဲ့နေရာပါ NWO=New World Owners
Byron Sonne, 37,
* Possession of explosives for an unlawful purpose.
* Possession of dangerous weapons.
* Intimidation ofajustice system participant by threat.
* Intimidation ofajustice system participant by watch and beset.
* Attempted mischief.
မှတ်သားစရာကတော့နာမည်ကို face book မှာထည့်ပြီဓါတ်ပုံရှာခဲ့တာပါပဲ။
ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီနေ့ထွက်တဲ့ကြေငြာချက်တခုကတော့sound cannonsသုံးမယ်ဆိုတာပါပဲ..sound cannons
pre-recorded messages တွေကိုဆန္ဒပြသူတွေဆီsound cannonsနဲ့ကြေငြာမယ်လို့ဆိုပါတယ်..ဒါဟာ
နားကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ဒီနေ့တရားရုံးမှာcivil rights groups၂ခုကရှေ့နေနဲ့အတူကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်၊
Gay & Lesbians တွေလည်းမကျန်ပါဖူး..
"We're queer, we're fabulous, we're against the G20," and "My gender is not illegal,"
'Harper don't preach' လို့လည်းသီချင်းလုပ်ဆိုပါတယ်။၀န်ကြီးချူပ်စတီဗင်ဟားပါးကိုပြောတာပါ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/23/20100အကြံပြုခြင်း
23 June 2010 ဒိုင်ယာရီ
http://www.mediafire.com/file/umchmym1tmo/23 June 2010 yeyintnge Diary.doc
23 June 2010 Yeyintnge Diary
စစ်အစိုးရ ရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုမည်မဟုတ်ဟု အမေရိကန်ပြောကြား
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီနှစ်အတွင်း ပြုလုပ်မဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှု ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ မိမိတို့က ယုံကြည်ထားကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုကိုလည်း ရရှိမှာ မဟုတ်ကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ဇွန်လ ၂၂ ရက် မနေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ် ။
အမေရိကန် အစိုးရဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ မနှစ်က စတင်ပြီး အနီးကပ် ဆက်ဆံဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဦးအောင်ဒင်နဲ့ ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။
By ဦးသိန်းထိုက်ဦး အင်္ဂါ, 22 ဇွန် 2010
ဦးမိုးဇော် ဗုဒ္ဓဟူး, 23 ဇွန် 2010
အောင်ကျော်ခင် / ၂၃ ဇွန် ၂၀၁၀
မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးနဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးဟာ စာရင်းလိမ်ပြတဲ့နေရာမှာ တူတယ်။ အထက်ကအာဏာပိုင်ကို အမြဲတမ်းကြောက်ရတဲ့စနစ်မှာ အထက်လူကြီးကျေနပ်အောင် စာရင်းလိမ်ပြတာဟာ ဓလေ့ထုံးစံလို ဖြစ်နေပြီ။ ကျေးလက်ကိုဆင်းပြီး စာတမ်းကောက်ရင်လည်း အချက်အလက်ကို အမှန်အတိုင်း မှတ်တမ်းမတင်ဘဲ အထက်လူကြီးကြိုက်အောင် ရေးကြတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်အစိုးရ စာရင်းအင်းဌာနက အချက်အလက်တွေဟာ မမှန်ဘူးလို့ ၀ါရင့်အရာထမ်းတဦးက ပြောဖူးတယ်။
အာဏာရှင်နေ၀င်းအကြိုက်လိုက်ပြီး အောက်ခြေက စာရင်းလိမ်ပြတယ်။ စာရင်းလိမ်ပြရင်း ၁၉၈၇ မှာ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်သွားတယ်။ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရရင် နိုင်ငံခြားအကြွေးမှာ အတိုးဆပ်စရာမလိုတဲ့အတွက် အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးဖို့ မဆလစစ်အစိုးရက ကုလသမဂ္ဂမှာ လျှောက်ထားတယ်။ အဆင်းရဲဆုံးစာရင်းဝင်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အချက်တွေထဲမှာ စာတတ်သူ လူကြီးဦးရေ နည်းဖို့လိုတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းပညာရေးကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ စာတတ်သူများတော့ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် စာရင်းလိမ်ဝိဇ္ဇာ မဆလစစ်အစိုးရက စာတတ်သူ အလွန်နည်းကြောင်း စာရင်းလိမ်ပြနိုင်တဲ့အတွက် အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ စာရင်းဝင်ဖြစ်သွားတယ်။
၁၉၆၂ မှာ စစ်အာဏာသိမ်းကတည်းက ကလိမ်စေ့ငြမ်းဆင်လာတာမို့ အခုဆိုရင် စာရင်းလိမ်စီးပွားရေးသက်တမ်းဟာ (၄၈) နှစ် ရှိသွားပြီ။ စာရင်းဇယားတွေကို ကလိမ်ကလည်လုပ်လွန်းတဲ့အတွက် မြန်မာ့စီးပွားရေးကို လေ့လာသူအလွန်နည်းတယ်။ တိုင်းပြည်အ၀င်အထွက် ခက်ခဲရတဲ့အထဲ စာရင်းလိမ်ကို လေ့လာရပြန်တော့ သိပ်စိတ်မရှည်တော့ဘူးပေါ့။ ဒါတောင် လွန်ခဲ့တဲ့ မေလနဲ့ ဇွန်လအစောပိုင်းက မြန်မာ့စီးပွားရေးစာတမ်း (၂) စောင် ထွက်လာသေးတယ်။ ၀ါရှင်တန်အခြေစိုက် ငြိမ်းချမ်းရေး သုတေသနဌာန United States Institute of Peace က မြန်မာ့စီးပွားရေးအထူးအစီရင်ခံစာကို မေလမှာ ထုတ်ဝေတယ်။ ရေးသူဟာ ၀ါရင့်သုတေသီ Lex Rieffel ဆိုသူဖြစ်တယ်။ အနှစ် (၆၀) လောက် တိုးတက်မှု ဆိတ်သုဉ်းနေတဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးကို သုံးသပ်ထားတာပါပဲ။
တောင်ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်နဲ့ အင်ဒိုနီးရှားမှာ အာဏာရှင်အစိုးရလက်ထက် စီးပွားရေးတိုးတက်လာလို့ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းနိုင်ကြပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာတော့ စစ်အစိုးရဟာ စီးပွားရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင် မလုပ်နိုင်တာကြောင့် သူများနိုင်ငံလို မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ Lex Rieffel က ဆိုတယ်။ ဒါကြောင့် ပထမဆုံးအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်းမွန်ဖို့သာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက တိုက်တွန်းရမယ်လို့ဆိုတယ်။ တိုင်းပြည် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းကဏ္ဍဟာ အဓိကကျပေမယ့် နေရာတကာချုပ်ကိုင်တဲ့ နအဖဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ရှင်သန်ကြီးထွားလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းထဲမှာ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် ရှိလာပြီး ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်မှုတွေကို ရုပ်သိမ်းမှသာလျှင် မြန်မာ့စီးပွားရေးအလားအလာ ကောင်းမှာဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၀ မြန်မာ့စီးပွားရေးအထူးစာတမ်းမှာ ဖော်ပြထားတယ်။
မြန်မာ့စီးပွားရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ အခြေစိုက်တဲ့ သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့ Macquarie တက္ကသိုလ် ဘောဂဗေဒဌာန ပါမောက္ခ Sean Turnell ကတော့ နအဖရဲ့ ကလိမ်ခြုံစောင်ကို ဖယ်ရှားပြီး အတွင်းသရုပ်ကို လေ့လာထားတဲ့စာတမ်းကို မီးမောင်းထိုးပြတာပါပဲ။ မြန်မာ့စီးပွားရေး (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ (၁၄) ရာခိုင်နှုန်းအကြား တိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့ နအဖစာရင်းလိမ်ကို အရင်ဆုံးဖြေရှင်းထားတယ်။ စီးပွားရေး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာရင် လောင်စာစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကလည်း တိုးပွားလာတာသဘာဝပါ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာတော့ နအဖရဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းထား မြင့်မားနေပြီး ဓာတ်ဆီနဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုနှုန်းက အလွန်နိမ့်ကျနေတာကြောင့် စာရင်းလိမ်တိုးတက်မှုဖြစ်တာ ထင်ရှားတယ်တဲ့။
စစ်အစိုးရရဲ့ စာရင်းလိမ့်ဓလေ့ကြောင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းကို ခန့်မှန်းရတာဟာ အလွန်ခက်တယ်။ Sean Turnell
ကတော့ အကြောင်းသိမို့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းဟာ (၂) သို့မဟုတ် (၃) ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ရှိနိုင်တယ်လို့ တွက်ပြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးရဲ့ တနှစ်ထုတ်လုပ်မှုဟာ (၄၃၅) ဒေါ်လာသာရှိတာကြောင့် အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာ အနည်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေတွေကို တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အသုံးမပြုတာကိုလည်း အစီရင်ခံစာ (၂) ခုစလုံးက ထောက်ပြတယ်။ ဓာတ်ငွေ့ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေကို နိုင်ငံ့ငွေစာရင်းမှာ အကုန်လုံး ဖော်ပြထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်တွင်းမှာ စာရင်းလိမ်ပြပြီး ဓာတ်ငွေ့ကရတဲ့ ငွေအတော်များများ နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေမှာ အမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ အပ်နှံထားတယ်လို့ဆိုတယ်။
စာရင်းလိမ်စီးပွားရေးစနစ်မှာ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေ မျက်စိကျနေတာဟာ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ်ယူတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံခြားအရင်းအနှီးနဲ့ အတတ်ပညာနဲ့ အလုပ်သမားတွေ ၀င်လာကြပြီး ဓာတ်ငွေ၊ ဓာတ်သတ္တု၊ ရေနံ၊ ကျောက်မျက်၊ ရေအားလျှပ်စစ် စတာတွေကို ထုတ်ယူကြတာဟာ မြန်မာပြည်သားတွေ အကျိုးမခံစားရပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်က အတိုင်းပါပဲ။ အင်္ဂလိပ်နေရာမှာ စစ်ဗိုလ်ကို အစားထိုးကြည့်လိုက်ရင် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်ထွက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်ဟာ မြန်မာစစ်ဗိုလ်လို ဒို့တာဝန်အရေးတွေနဲ့ လိမ်ညာနေတာမဟုတ်တော့ မြန်မာတွေ မစားရမှန်းသိတယ်။ နအဖကတော့ သဘာဝသယံဇာတကို နိုင်ငံခြားရောင်းစားပြီး အိတ်ထဲထည့်တာကို စာရင်းလိမ်ထားတော့ ပြည်သူတွေအဖို့ မစားရ၀ခမန်း ဖြစ်ကုန်တာပေါ့။ ဒါကြောင့် တရုတ်၊ ပြင်သစ်၊ ထိုင်းနဲ့ တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတွေ သယံဇာတ ထုတ်ယူနေတာဟာ မြန်မာ့အနာဂတ်အတွက် မကောင်းတဲ့ အလားအလာပဲဖြစ်တယ်။
စာရင်းလိမ်စနစ်နဲ့ အစိုးရနှောင့်ယှက်မှုကင်းတဲ့ ကောက်ပဲသီးနှံကဏ္ဍမှာ အောင်မြင်နေပုံကိုလည်း Sean Turnell က ဖော်ပြထားတယ်။ ၂၀၀၉/၂၀၁၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ မြန်မာပြည်ထွက်ပဲမျိုးစုံ (၈၄) ရာခိုင်နှုန်းကို အိန္ဒိယက ၀ယ်သွားတယ်။ တရုတ်ပြည်ကိုလည်း နယ်စပ်လမ်းကြောင်းက တင်ပို့တယ်။ အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်မှာ ပဲအထွက်နည်းသွားတာဟာ မြန်မာအတွက် အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်။ စစ်အစိုးရ ၀င်မရှုပ်မချင်း ပဲရောင်းလို့ ကောင်းနေမယ့်ပုံပါပဲ။ တချိန်က ကမ္ဘာပေါ်မှာ အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့တဲ့ ဆန်လုပ်ငန်းဟာ စစ်အစိုးရ ၀င်ရှုပ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်း ဈေးကွက်ပျောက်ပြီး ဆန်ကွဲတင်ပို့ခဲ့တဲ့အဆင့် ဖြစ်သွားတယ်။
နိုင်ငံခြားဝင်ငွေအများဆုံးက သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ဒုတိယအများဆုံးက ပဲမျိုးစုံ၊ တတိယက ကျွန်းသစ်နဲ့ သစ်မာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ပဲလုပ်ငန်းထဲမှာ နအဖအသိုင်းအ၀ိုင်းက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပါနေမှာ သေချာတယ်။ အ၀တ်အထည်လုပ်ငန်းက စတုတ္ထ၀င်ငွေ အများဆုံးဖြစ်ပြီး ဆန်က နံပါတ် (၅) အဆင့်က လိုက်နေတယ်။ အ၀တ်အထည်ကို ဂျပန်နဲ့ဥရောပကို တင်ပို့တယ်။ ကျွန်းသစ်နဲ့ သစ်မာတင်ပို့တာဟာ ငွေရပေမယ့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးစေတဲ့အတွက် ဒေသခံလူ့အဖွဲ့အစည်းကို ထိခိုက်နစ်နာစေတယ်။ သစ်နဲ့ကျောက်မျက်ကို တရုတ်ပြည်က အများဆုံးဝယ်ယူတယ်။ မြန်မာပြည်ကို စားသုံးကုန်ပစ္စည်း အများဆုံးရောင်းချနေသူဟာ တရုတ်၊ ထိုင်းနဲ့၊ စင်ကာပူဖြစ်တယ်။
၁၉၆၂ မှာ စစ်အစိုးရတက်လာပြီး စာရင်းလိမ်စီးပွားရေးစနစ် စတင်ကျင့်သုံးချိန်ကစပြီး လက်ရှိ စစ်အစိုးရလက်ထက်အထိ ပေးဆပ်စရာရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားအကြွေးဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း (၈,၁၀၀) ရှိတဲ့အတွက် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုရဲ့ (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းဟာ အကြွေးဖြစ်ကြောင်း Sean Turnel က တွက်ပြထားတယ်။ မဆလခေတ်က ကြွေးဟောင်းက သန်း (၃,၅၉၄) ရှိပြီး ကြွေးသစ်က သန်း (၄,၅၀၆) ရှိတယ်။ ကြွေးဟောင်းမှာ ဂျပန်ကို ဒေါ်လာသန်း (၂,၂၀၀)၊ ဂျာမဏီကို သန်း (၃၅၀)၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (အေဒီဘီ) ကို သန်း (၃၂၅)၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကို သန်း (၇၁၉) ပေးစရာရှိတယ်။ အကြွေးမဆပ်နိုင်လို့ နောက်ထပ်မချေးတာဖြစ်တယ်။ ကြွေးသစ်ထဲမှာတော့ တရုတ်က အများဆုံးဖြစ်မှာ သေချာတယ်။ နအဖမှာ ဒေါ်လာငွေလက်ကျန် ဒေါ်လာသန်း (၅,၀၀၀) ကျော် ရှိရဲ့သားနဲ့ မဆလကြွေးဟောင်းကို မဆပ်တာပါ။
ဗိုလ်နေ၀င်းဦးဆောင်တဲ့ မဆလအစိုးရရဲ့ နိုင်ငံခြားအကြွေးတွေကို နောက်တက်တဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့ နအဖအစိုးရက မဆပ်တဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်။ ကြွေးဟောင်းတွေကိုမဆပ်လို့ မြန်မာအစိုးရကို အေဒီဘီနဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ငွေချေးဖို့ မစဉ်းစားတာပါ။ တကယ်တော့ ဘဏ် (၂) ခုကို ဆပ်ရမယ့်အကြွေးက ဒေါ်လာသန်း (၁၀၄၄) သန်းသာရှိလို့ နအဖအုပ်စု ခိုးထားတဲ့ ငွေလောက် မများပါဘူး။ နောက်တင်တဲ့အကြွေးသစ်ဟာ တရုတ်ကိုဆပ်ရမှာဖြစ်လို့ မဆပ်နိုင်ရင် တရုတ်အလိုကျ လိုက်လျောဖို့သာ ရှိပါတော့တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ကြီးစိုးနေသမျှ စာရင်းလိမ်စီးပွားရေးအဆင့်ထက်ပိုပြီး တိုးတက်စရာအလားအလာမရှိကြောင်း သုံးသပ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ထက်အောင် Wednesday, June 23, 2010
THE COMITTEE TO DESTROY THE WORLD
The Operation Condor.....“လင်းတ စစ်ဆင်ရေး ”
ဒီကနေ့ ဗမာစစ်အုပ်စုလုပ်နေတာတွေ အားလုံးက ၁၉၈၀ မတိုင်ခင် လက်တင်အမေရိကားမှာ
http://www.mediafire.com/file/m3vmym0ylzz/Brazil and Operation Condor._final_.pdf
Brazil and Operation Condor._final
နောက်ဆုတ်မပေးရအောင် တောင့်ခံထားကြဘို့တော့လိုတယ် ”
ငါတို့ခေါင်းဆောင်၊ လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ ၆၅နှစ်မြောက်မွေးနေ့လို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ကျင်းပခဲ့ ကြတယ် ၊ လက်ရှိ , ရှိနေတဲ့ ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအတွက် ဒီလိုအခန်းအနား တွေဟာ တစ်စုံတရာအထောက်အကူပြုလှုပ်ရှားမှုမျိုး ဖြစ်စေမှာပါ ၊ ဒါပေမဲ့ အခန်းအနား ပြီး သွားရင် ထုတ်ပြန်ချက်စာရွက်တွေ , သ၀ဏ်လွှာ ဆိုတာတွေ , ဓါတ်ပုံတွေ , ဟိုတစ သည် တစ ဟိုလူနင်းသည်လူနင်းပြန့်ကျဲလို့ ၊ ၂၀၀၉ က မဲဆောက်မှာ လုပ်တဲ့ ၆၄နှစ်မြောက် ပွဲမှာ တုန်းကဆို တခါသုံးဗူးနဲ့နန်ကြီးသုတ်ကြွေးပြီး ကြေငြာချက်တွေတစ်ရှုးဖြစ်ကုန်ရော၊ ပွဲအပြီး အမှိုက်ပုံးထဲမှာ ပွဲထဲမှာဝေတဲ့ဒေါ်စုပုံမျက်နှာဖုံးတွေ အထပ်လိုက်။
အဲဒီလို ရာသီစာအဖြစ် ၊ သတင်းထဲပါရုံ ၀တ်ကျေတန်းကျေအခန်းအနားတွေကတော့ ဟန် ဆောင်နေကြသလိုပါပဲ၊ တကယ်လေးစားတန်ဘိုးထားရင် ဒေါ်စုလွတ်မြောက်ရေးရဲ့ အဖြေမှန်ဖြစ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင် ဖြုတ်ချရေးတိုက်ပွဲ ထိထိရောက်ရောက်ဆင်နွှဲကြရမှာ။
ခုပဲကြည့် အမေရိကန်နယူးယောက်မှာလုပ်တဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာ စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုဝင်တယောက် က ဒေါ်စုပုံကိုခြေနဲ့ကန်သွားပြီ ၊ အခန်းအနားကပန်းတွေကိုနင်းသွားပြီ ၊ အဲဒီအတွက် မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပသူတွေကိုအပြစ်မတင်လိုပေမဲ့ နှစ်ချက်တော့ပြောချင်ပါတယ် ။
နံပါတ်တစ်က ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်ကနေ ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်စစ်အုပ်စုကိုလျှော့မတွက်မိဘို့ သင်ခန်းစာ ယူစေချင်ပါတယ် ၊ စစ်အုပ်စုဟာ ဒေါ်စုပုံမပြောနဲ့ ဘုရားပုံတောင်တက်နင်းဘို့ဝန်မလေးဘူး၊ သံဃာကိုတောင်ရိုက်ဘို့ဝန်မလေးဘူးဆိုတာ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာမှာ ကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ သိခဲ့ကြပြီးပါပြီ ၊ မိမိတို့တော်လှန်ရေးအင် အားစုတွေကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်တာ ၊ ရောက်ရာ နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ငြိစွန်းအောင် ထောင်ချောက်ဆင်တာ ၊ ဂုဏ်သိက္ခာယုတ်လျော့အောင် လုပ်တာ စသဖြင့်ဘာမဆိုလုပ်မဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိရှိကြပါ။
နံပါတ်နှစ်အချက်ကတော့ ဒေါ်စုဟာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်၊ လူထု ခေါင်းဆောင် ဖြစ်တယ် ၊ ဒေါ်စုပုံကိုကန်ပြတာဟာ မင်းတို့တော်လှန်ရေးဆိုတာကိုဒါပဲကွလို့ စော်ကား စိန်ခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်၊ ပြည်တွင်းမှာလူကိုယ်တိုင်ကိုဖမ်းထားပြီး ထင်ရာစိုင်း နေရုံသာ မက ပြည်ပမှာပါထင်ရာစိုင်းတော့မယ်လို့ စစ်အုပ်စုက ရှေ့တိုးပြီးရင်းတိုးလာတာာ ဖြစ်တယ် ၊ ဒါမျိုးကို ပြီး,ပြိးရောသဘောထားရင် နောက်ဆုတ်သထက်ဆုတ်ပေးတာမျိုးဖြစ်ပြီး အတိုက်အခံ လောက နေစရာတောင်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါ့ကြောင့် ဒီစော်ကားခံရမှုအတွက် ထိထိရောက် ရောက်တုန့်ပြန်ဘို့ တာဝန်ရှိသွားပြီဆိုတာ သတိပေးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
စစ်အုပ်စုက တလှမ်းခြင်း ပါးပါလေးရှေ့တိုးခဲ့ပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကို သိသိသာသာ ဆုတ်ပေးခဲ့ရတာချည်းပါပဲ ၊ ရှေ့နှစ်လမ်းတိုးရအောင် နောက်တစ်လှမ်းဆုတ်ပေးသလိုလိုနဲ့ မူလ ရပ်ခဲ့ရာကိုတောင် ပြန်မလှမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေချည်းကြုံခဲ့တာပါပဲ။
အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ ပြည်တွင်းမှာဆိုရင် NLD ၊ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မှာဆို ABSDF ဆိုတဲ့ အဖွဲ့တွေကိုကြည့်ပါ ၊ နှစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်ဆိုတဲ့သက်တမ်းမှာ ရှေ့ကိုဘယ်လောက်တိုးနိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ကိုဘယ်လောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရပါသလဲ ။
လတ်တလောအရေးအပါဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ NLD ကနေ စပြောကြည့်ပါရစေ ၊ ကျွန်တော် တို့ဒီမိုအရေစီအင်အားစုအားလုံးလိုလိုက NLD ကိုတပ်ဦးပါတီအဖြစ် သဘောထားဝန်းရံခဲ့ကြ တာ စစ်အုပ်စုကသိတယ်၊ဒါကြောင့် ၁၉၈၉မှာ ဒေါ်စုကိုဖမ်းကြည့်ပြီး NLD အခြေအနေကို ကြည့်ပါတယ် ၊(တိတိပပပြောရရင် ၁၉၈၉ မတ်လမှာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ကိုအရင်ဖမ်းကြည့်ပြီး ပြောပလောက်တဲ့ အုံကြွမှုမရှိဘူးဆိုမှ ဂျူလိုင်လမှာ တလှမ်းထပ်တိုးပြီး ဒေါ်စုကိုဖမ်းတာပါ)၊ အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုလိုက်သည် ဆိုတာလောက်ပဲရှိပြီး ထိထိရောက်ရောက်တိုက်ပွဲဝင်တောင်းဆိုမှုမျိုးမလုပ်တဲ့အခါမှာ စစ်အုပ်စုဟာ သူတို့ရထားတဲ့ အခြေနေကနေနောက်ပြန်မဆုတ်တော့ပဲ ဒေါ်စုကိုအကျယ်ချုပ်ချထားလိုက်ပြီး သဘောထား တင်းမာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာမျိုး တလှမ်းချင်းတိုးလာပါတော့တယ်။
အဲဒီအချိန်ကNLDမှာ ပါတီဝင်အင်အားသန်းနဲ့ချီရှိနေပြီး လူ့ဘောင်သစ်၊ ဗကသ စတဲ့ ကျောင်း သားအဖွဲ့အစည်းတွေကလဲ ၀န်းရံရှိနေခဲ့တာပါ ၊ ၁၉၈၈မှာ ဒေါ်စုက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီး အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေးဆိုပြီး (ရဲရဲဝံ့ဝံ့) ကျောင်းသား တွေ
ပြည်သူတွေရှေ့ကနေဦးဆောင်ခဲ့လို့ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်လာခဲ့ တာပါ ၊ ဒေါ်စုထိမ်းသိမ်းခံနေရစဉ်တလျှောက်လုံးမှာတော့ NLD ဟာ ဒေါ်စုရဲ့ (မတရားတဲ့ အမိန့်
အာဏာဟူသမျှ တာဝန်အရဖီဆန်ကြဆိုတဲ့) ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေးမူကို သွေဖီခဲ့ပါတယ်၊ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ပြဿနာနဲပြီးရော နောက်ဆုတ်အလျှော့ပေးရေးမူကိုပဲ ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်၊ (ရှေ့ဆက်ရမဲ့ခရီးအတွက် အပြုသဘောပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် တချို့လူနည်းစုလေး တိုက် ပွဲဝင်ခဲ့တာကို ထောက်ပြကာဗာလုပ်မငြင်းစေချင်ပါဘူး၊ဗမာတစ်နိုင်ငံလုံး အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပေါင်းမှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနှစ်ထောင်ကျော်ကျော်ရှိတာ၊ အဲဒီထဲက NLD အင်အား ဟာ သန်းချီရှိခဲ့တဲ့ပါတီဝင်တွေနဲ့ဆိုရင် ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး)။
၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေက NLD ကို ထင်မှတ်ထားတာထက်ကို ထောက်ခံခဲ့ကြ တယ် ၊ဒါပေမဲ့ NLD က ပြည်သူ့အားနဲ့ အနိုင်ကိုကိုင်ပြီးရှေ့မတိုးခဲ့ဘူး ၊ စစ်အုပ်စုကသာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြအာဏာမလွှဲတဲ့အပြင် ရှေ့တလှမ်းတိုးပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲ ရေးခေါင်စဉ်နဲ့ ညောင်နှစ်ပင်အမျိုးသားညီလာခံဆိုတာကို လုပ်လာခဲ့တယ် ။ဒီကြားထဲမှာ စစ် အုပ်စုကတစ်လှမ်းခြင်းတိုးပြိး NLD ကတစ်လှမ်းခြင်းဆုတ်ပေးခဲ့တာ အများကြိး ၊ အားလုံးသိပြီး သားတွေမို့ အသေးစိတ်မပြောနေလိုတော့။ အချို့ဆို နောက်ဆုတ်ရင်းဆုတ်ရင်း ပြည်သူ လူထု နှင့်ဝေးရာနိုင်ငံများဆိသို့ အဝေးရောက်အစိုးရအဖြစ်ရောက်ရှိပြီး အချောင်သမားများပင် ဖြစ်နေ ကြလေပြီ။
၂၀၀၈နောက်ပိုင်းမှာတော့ စစ်အုပ်စုဟာ ရှေ့ကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းတိုးလာပါတော့တယ်၊ ဒါဟာလဲ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုချိတ်ပိတ် ၊သံဃာတွေကိုရိုက်နှက်သတ်ဖြတ် ထောင်ချလုပ်တာတောင်မှ ဘယ်ပါတီကမှဦးဆောင်အုံကြွမလာတဲ့အပေါ် ၊ သံဃာတော်တွေ အပါအ၀င်နယ်စပ်ထွက်ပြေးသူတွေကလည်း ထိထိရောက်ရောက်ပြန်တိုက်ပွဲဝင်ရေးမလုပ်ပဲ ဒုက္ခသည်အဖြစ် နိုင်ငံတကာထွက်သွားတာမျိုးပဲလုပ်တဲ့အပေါ် အပိုင်တွက်ပြီးတိုးလာတာ မျိုးပါ ၊ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေဆန္ဒခံယူပွဲဆိုပြီးတိုးကြည့်ပြီးနောက်မှာ ဒေါ်စုကို အိမ်ချုပ်ကနေဆိုင်းငံ့ ထောင် ဒါဏ်ဆိုတာမျိုး တိုးကြည့်တယ် ၊ ဘာမှဖြစ်မလာတဲ့နောက်မှာ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေဆိုတာနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတိများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေကို မတရား သဖြင့်ကြေငြာ ပြီး လုံးလုံးလျားလျားဖိတိုးလိုက်တော့တာပါပဲ ။၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲကို သူတို့ ဘက်က လုံးလုံး ဖျောက်ဖျက်လိုက်ပြီလို့ တရားဝင်ကြေငြာလိုက်တာပါပဲ ။
၂၀၁၀ မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ ၊ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ထပ်ပြီးမှတ်ပုံတင်စရာ မလိုတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေ့ဟာ NLD တိုက်ပွဲဝင်ပြီ၊နောက်မဆုတ်တမ်းရပ်ခံပြီလို့ ယူဆစရာ နေ့တစ် နေ့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ၊အဖွဲ့စည်းအားလုံးကလဲ ထောက်ခံအားပေးခဲ့ပါတယ်၊ခုတော့ NLD ရဲ့ အဲဒီ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ထိပ်တိုက်မတွေ့ရေး၊ ပြဿနာကင်းကင်းနေထိုင် ရပ်တည် နိုင်ရေး အတွက်လားလို့တောင် စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်။
စစ်အုပ်စုကတောင်ဘာမှထပ်မလုပ်ရသေးဘူး ၊ သစ္စာဖေါက်တွေက ပါတီကိုစွန့်ခွာကြတယ်၊ တိုက်ပွဲမ၀င်ရဲသူတွေက ပါတီဆိုင်းဘုတ်တွေ ဖြုတ်ထားလိုက်ကြတယ်၊လက်ကျန်လူတွေက ပါတီဆိုင်းဘုတ်သာမဖြုတ်တာ၊ ထိပ်တိုက်မတွေ့ရေးရှောင်ရှားနေကြပြီ ၊ပါတီဌာနချုပ်
(သို့မဟုတ်) တိုင်းရုံးလိုနေရာတွေမှာလုပ်ရမဲ့ NLD ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ၊လူထုခေါင်း ဆောင်ရဲ့မွေးနေ့ကို ရန်ကုန်မြို့စွန်(၁၀မိုင်ကုန်း)က ဒေါ်မေနှင်းကြည်အိမ်မှာပဲလုပ်တာ ၊ NLD ပါတီကြီးရှေ့ဆက်ရမဲ့ခရီးအတွက်ဆွေးနွေးပွဲကို ပါတီရုံးမှာမလုပ်ပဲ ဘဘဦးတင်ဥိးအိမ်မှာပဲ လုပ်တာတွေဟာ တိုက်ပွဲကိုရှောင်တယ်လို့ခံစားမိပါတယ် ။ ဒီလိုကိုပဲ နိုင်ငံရေးနည်းပရိယာယ် ဆိုရင်လဲ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်လုံးရှေ့မတိုးနိုင်တဲ့ အခံဘက်နည်းဆိုတာသိနားလည်ပြီး ပြောင်းလဲ သင့်နေပါပြီ ။
ဒေါ်စုအပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးခြွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးရေး ၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနှင့်မကိုက်ညီသည့်အချက်များကိုပြင်ဆင်ပေးရေးနှင့် အား လုံးပါဝင်နိုင်မည့် လွတ်လပ်၍တရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် နိုင်ငံတကာ၏စောင့်ကြပ် လေ့လာမှုကိုခွင့်ပြုရေး စသည့်အချက်များပါဝင်သောရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်ကို လူမှုရေးလုပ် ငန်းများသာလုပ်နေရုံ၊ပါတီမပျက်ပါဟု ပြောရရုံတွေ့ဆုံပွဲများ၊အခန်းအနားများကျင်းပနေရုံမျှနှင့် ဆက်လက်ဆုတ်ကိုင်ထားနိုင်ပါမည်လား ။ စစ်အုပ်စုကတော့ သူတို့သဘောသူတို့ဆောင်၍ မည်သည်ကိုမှမလိုက်လျောပဲ ဆက်တိုးနေလေပြီ၊် ရွှေဂုံတိုင်ကြေငြာစာတမ်း၏ဂုဏ်သိက္ခာ အတွက် NLD မည်သို့ထိမ်းသိမ်းပါမည်နည်း ။
ပင်မနိုင်ငံရေးအခြေခံမကောင်း၍ လိုအပ်ချက်များရှိလာရသော လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကိုကျော်သူ၊ဦးအေးမြင့်၊မဖြူဖြူသင်းတို့ကဲ့သို့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကလုပ်ကြမှာဖြစ်ပြီး NLD ကဲ့သို့လူထုကိုယ်စားပြုနိုင်ငံရေးပါတီကြီးက အကြောင်းရင်းမှန်ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်း လဲရန်သာ တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဘဘဦးတင်ဦးလို ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက စည်းရုံးရေးခေါင်းစဉ် ဖြင့် HIV သမားများနှင့်အတူထမင်းစားပြရန်၊ ဘဘဦးဝင်းတင်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက သစ်ပင်
လျှောက်စိုက်ပြရန် မလိုတော့ပါ ။
NLD ပါတီဖြတ်သန်းခဲ့သောသမိုင်းကိုကြည့်ရင် ပါတီဝင်အများစုဟာ မူဝါဒဦးဆောင်မှု နောက် ကိုမလိုက် ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်ဦးဆောင်မှုနောက်သို့သာ လိုက်ခဲ့ကြတယ် ၊ထို့အတွက် ဆုံးဖြတ် ချက် အမှားများဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ် ၊ ထို့အတွက် ပါတီဝင်အင်အားများစွာလျော့ကျသွားခဲ့ရတယ်၊ ထို့ အတွက် ပါတီကိုကျောခိုင်းပြေးသော သစ္စာဖေါက်များကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ထို့အတွက် စစ်အုပ်စု ကိုထိထိရောက်ရောက်တိုက်ပွဲမ၀င်နိုင် အခံဘက်မှနေဆုတ်ပေးခဲ့ရတ်ာချည်းဖြစ်တယ်။ဘဘ ဦးတင်ဦး , ဦးဝင်းတင်နှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာ် ဦးစီးဦးဆောင်ကောင်းများဖြစ်ကြ ပါတယ် ၊ သို့သော် ဒေါ်စုပင်လျှင်အသက်ခြောက်ဆယ့်ငါးနှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပြီး ဘဘများကား ရှစ် ဆယ်ကျော်များဖြစ်နေကြပေပြီ ၊ နောင်မည်မျှကြာအောင် ကျန်းမာရေးကောင်းကောင်းဖြင့် စစ်အုပ်စုကိုအံတုနေနိုင်ပါမည်နည်း၊ NLD အနေဖြင့်အချိန်ရှိခိုက်ကလေးတွင် ပြတ်ပြတ်သား သား တိုက်ပွဲတရပ် လူထုကိုဦးဆောင်ဆင်နွှဲသင့်ပေပြီ ။
စစ်အုပ်စုကတော့ နောက်ထပ်ခြေလှမ်းများစွာ ထပ်တိုးတော့မည်ဖြစ်ပါတယ် ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်ပြီး ကြံ့ဖွတ်ပါတီအား အရပ်သားအစိုးရအဖြစ်သရုပ်ပြပါတော့မယ်၊NLD ပါတီအပြင် အခြားဆန့်ကျင်နိုင်သည့်ပါတီများကိုပါ ဖျက်သိမ်းပေလိမ့်မယ်၊(ယခုကား အချိန်တခု အခြေနေ တခု စောင့်နေခြင်းသာဖြစ်နိုင်ပြီး သေချာပေါက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်)၊ ဒီပဲယင်းကဲ့သို့ ယုတ်မာ
ကောက်ကျစ်တဲ့နည်းနဲ့ လူသတ်ပွဲများထပ်မလုပ်ပါလို့လည်း ဘယ်သူအာမခံနိုင်ပါ့မလဲ ။
“ နောက်မဆုတ်လိုလျှင် ရန်သူကိုရှေ့မတိုးနိုင်အောင်ကာ ” ဆိုတဲ့သဘောတရားအတိုင်း စစ်အုပ်စုထင်ရာစိုင်းနေသည်ကိုတားဆီးရန်အတွက် NLD ပါတီဟာ လူထုနှင့်ဒီမိုကရေစီအင် အားစုတို့၏တပ်ဦးပါတီအနေဖြင့်သော်လည်ကောင်း ၊ ကျဉ်းထဲကြပ်ထဲရောက်နေသည့် ပါတီ တစ်ရပ်အနေဖြင့်သော်လည်ကောင်း တိုက်ပွဲတစ်ရပ် မလွှဲမသွေဆင်နွှဲရမှာပါ ။
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာလဲ ကျောင်းသားတပ်မတော် (ABSDF)ရဲ့အခြေအနေက ရှေ့တိုးဘို့မပြောနဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပါလို့ပြောဖြစ်ရုံ ဆိုးဆိုးရွားရွားအခြေနေမှာရှိနေပါတယ်။
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးကနေပေါက်ဖွားပြီး တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေဝန်းရံပေးခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော် (ABSDF) ဟာ စစ်အုပ်စုက ရန်သူလို့တန်းတူထား သတိနဲ့တိုက်ရ လောက်အောင် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ဘူးပါတယ် ။ ပြောပလောက်တဲ့ တိုက်ပွဲတွေ အောင်ပွဲတွေလဲ ရှိခဲ့ဘူးပါတယ် ၊ နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ရဲဘော်ဟောင်းတွေက ကျွန်တော်/ကျွန်မဟာ ABSDF ကပေါ့လို့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာပြောရလောက်အောင်လည်း သိက္ခာကြီးမားခဲ့တာပါ။
နယ်မြေရပ်တည်မှုအရ တိုင်းရင်းသားတွေကိုမှီခိုခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်(ABSDF)ဟာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့စည်းတချို့ စစ်အုပ်စုနဲ့ အပစ်ရပ်ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီးနောက်မှာ အခက်အခဲ
တွေ စတင်ကြုံတွေ့လာခဲ့ပါတယ် ၊ ABSDF ကိုအဓိကကူညီခဲ့တဲ့ KNU တပ်စခန်းအချို့နဲ့ မာနယ်ပလောကို စစ်အုပ်စုသိမ်းပိုက်ပြီးချိန်ကနေ တဖြည်းဖြည်းဆုတ်ယုတ်ခဲ့ပါတယ်။
စစ်အုပ်စုက ရှေ့ကိုတစ်လှမ်းချင်းတိုးပြီး နယ်မြေတစ်ခုခြင်းသိမ်းလာလို့ တဖြည်းဖြည်းဆုတ် ပေးခဲ့ကြရာမှာ အဆိုးဆုံးက စိတ်ဓါတ်ရေးရာအရပါနောက်ဆုတ်လိုက်ကြခြင်းပါ ၊ လက်နက် ကိုင်ပြီးတော်လှန်မယ်လို့ ခံယူချက်ပြင်းပြင်း စိတ်ဓါတ်ပြင်းပြင်းတောခိုခဲ့ကြတဲ့ ရဲဘော်တွေက၊ ခေါင်းဆောင်တွေအကွဲအပြဲ၊ အနေအစားဆင်းရဲ၊ရန်သူထိုးစစ်ဒါဏ်လဲခံရဆိုတာမှာ လက်နက် ကိုင်ဘ၀ဆိုတာကို တဖြည်းဖြည်းစွန့်ခွာသွားကြပါတယ် ။
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ ပေးဆပ်ရတာ တွေကိုဆက်ရင်မဆိုင်ချင်တော့လို့ ၊ ABSDF ရဲဘော်ဟောင်းအဖြစ် ပြတ်ပြတ်သားသား နှုတ် ထွက်ပြီး ဘယ်မှာသွားနေနေ ပြဿနာမရှိပါဘူး ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ABSDF ရဲ့ ရဲဘော်ပါ၊ ဗဟိုကော်မတီဝင်ပါဆိုပြီး မြို့တွေပေါ်မှာပဲ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ပုံစံနဲ့မတူတော့ပဲ ကွဲလွဲနေ နေကြတာတွေဟာ ABSDF ကို ပျက်ဆီးဘို့ဖြစ်လာစေပါတော့တယ်။
အထောက်အပံ့ရရေးအတွက် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကနေသွေဖီသွားတဲ့ တပ်ပေါင်းစုမှာ ၀င်ပါပြီးနောက်မှာ ရပ်တည်ချက်တွေပါ တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာပါတယ် ၊ ကိုယ့်တော်လှန် ရေးကိုယ်ယုံကြည်ရင် ဘယ်သူကအကြမ်းဖက်သမားပြောပြော လုပ်ရပ်ပြောပြော ၊ ရင်ဆိုင်ရဲ လုပ်ရဲဖြစ်ရမှာ၊ ခုတော့ မြို့ပေါ်မှာဘာဖြစ်ဖြစ် “ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါဘူး၊ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာ အဲဒီလူတွေမရှိပါဘူး၊အဲဒီလိုအကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကဘယ်တော့မှလုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး” ဆိုတာမျိုး ဥက္ကဌ/အတွင်းရေးမှုးဆိုသူတွေကိုယ်တိုင်က ငြင်းတော့တာပါပဲ ၊ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ဆိုတာ ဘာပါလဲ ၊ မြို့တွေပေါ်မှာ မိသားစုတွေနဲ့အေးဆေးနေပြီး၊ အရက် ကလေးသောက်ချင်တဲ့အခါသောက် ၊ဟိုဒီစားသောက်ဆိုင်တွေသွားလုပ်နေတာတွေက လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်လား ။
နှစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်ဆိုတဲ့ကာလမှာ ABSDF ဟာတဖြည်းဖြည်းဆုတ်ယုတ်လာနေပါတယ်၊ မြန်မာ ပြည်အောက်ပိုင်း ၊ တနင်္သာရီတိုင်း ၊ ရေးဘိတ်ထားဝယ်ကနေ အထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ် အထိ အင်အားသောင်းနဲ့ချီရှိခဲ့ရာကနေ ခုတပ်ရင်းဘယ်နှရင်းပဲရှိပါတော့လဲ ၊ တပ်ရင်းတစ်ရင်း စီမှာရော စစ်တိုက်နိုင်တဲ့အင်အား(ဖွဲ့စည်းပုံ)ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိပါတော့လဲ ၊ စစ်တိုက်ဘို့ လက်နက်အင်အားကရော ဘယ်လောက်ပဲရှိပါတော့လဲ ၊ တစ်လတစ်လ တောတွင်းလက်နက် ကိုင်စခန်းကို စစ်လက်နက်ရိက္ခာဖြည့်စည်းမှု ဘယ်လောက်ပဲလုပ်နိုင်ပါတော့လဲ ။
ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ ၊ ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ ပြန်လည်မြှင့် တင်သင့်ပါပြီ ၊ ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးခရီးကား လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်မပါပဲ စစ်အုပ်စုနှင့်တန်းတူ အခြေအနေ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါ ၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ မဲဆောက် , မဲစရီးယန်းနှင့်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ရောက်နေတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြန်စုစည်းပြီး လက်နက်ကိုင်အင်အားအဖြစ်ပြန်ရှိစေခြင်း၊ မဲဆောက် ,မဲစရီးယန်း,ချင်းမိုင်,ဘန်ကောက် စတဲ့မြို့တွေပေါ်က ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေကို ရံပုံ ငွေရှာဖွေရေးနဲ့ ထောက်ပို့တာဝန်အတွက် သီးသန့်ထားမဲ့သူကလွဲရင် တပ်ကိုအနီးကပ်ဦးစီးနိုင် တဲ့စခန်းတွေမှာနေထိုင်ဘို့ တာဝန်အဖြစ် ပြတ်ပြတ်သားသားညှိနှိုင်းရပါမယ်။ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ထိုးစစ်များဆင်နိုင်ရန် ကြိုးစားကြသင့်ပါတယ်။
မျှစ်ချိုးစား ၊၀ါးရင်းတုတ်ဖြင့်စစ်သင်တမ်းတက် ၊ရန်သူ့လက်နက်ကိုယ့်လက်နက် ၊ရန်သူ့ရိက္ခာ ကိုယ့်ရိက္ခာ ကြွေးကြော်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီး ၂၂နှစ်ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ပြီးကာမှ ဖွဲ့တည်ခဲ့တဲ့ကာလ ကထက် ဆိုးသောအခြေအနေမျိုးမရောက်စေလိုတော့ပါ ၊ တော်လှန်ရေးတစ်ရပ်လုံးရဲ့ အခြေ အနေအရ ရန်သူစစ်အုပ်စုအား ထိုးစစ်များမဆင်နိုင်သေးလျှင်တောင် မိမိတပ်များအခြေအနေ ယိုယွင်းလျော့ပါးမသွားစေရန် အထူးသတိထားတည်ဆောက်ကြရမဲ့အချိန် ရောက်နေပါပြီ ။
from 8888 People Power...
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/23/2010 1 အကြံပြုခြင်း
ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ Freedom, Development, and Human Worth စာတမ်းကောက်နုတ်ချက်...
ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့မင်္ဂလာ အတွက် ဘလော့ခ်ဂါ ဒီမိုဝေယံ၊ ဘလော့ခ်ဂါ အလင်းဆက် နှင့် ဘလော့ခ်ဂါ ခမိခဆဲ တို့မှစီစဉ်ပါသည်။*
ဘလော့ခ်ဂါ အလင်းဆက်ဘာသာပြန်ဆို ရေးသားပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည်ဒီလိုအတွေးအခေါ်နှင့်အရည်အချင်းပြည့်စုံသူတယောက်
Daw Aung San Suu Kyi's Paper
စစ်အစိုးရ ရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုမည...
နျူကလီးယား အစီအစဉ် မြန်မာစတင်၊ IAEA အရာရှိဟောင်း အ...